3 Waxyaabood Oo Loo Sameeyo Xaaskaaga Xilliga Caadada Si Jacayl Daran Ay Kuugu Qaado - Aayaha
Home»XIRIIRKA IYO GUURKA»3 Waxyaabood Oo Loo Sameeyo Xaaskaaga Xilliga Caadada Si Jacayl Daran Ay Kuugu Qaado
Inta lagu jiro mudada caadada, haweenku waxay la kulmaan waqti adag taas oo ku xidhan baaxada awoodda socodka dhiigga. Ka nin ahaan, waxaad u baahan tahay inaad xaaskaaga u muujiso taageero waqtigaan adag.
Haweenka aad ayay u qadarin doonaan wax kasta oo aad u sameyso markeey ku jiraan xilliga Caadada sababtoo ah qaakood dhib badan ayay maraan marka ay ku jiraan xilligaan.
Shabakada Aayaha, ayaa waxay halkaan idinkugu soo gudbineysaa qaababka aad mar kasta ku taageeri karto ama qadarin iyo daryeel aad ugu muujin karto gabadha xaaskaaga ah mar kasta oo ay ku jirto xilliga dhiigga caadada.
U iibi suufka nadaafadda (Tambooni)
Inkastoo rag badan oo wanaagsan ay arrintaan u arkaan mid aanan munaasib ahayn inay sameeyaan hadana waa qaab wanaagsan oo kalgacayl loogu muujiyo xaaskaaga.
U iibinta suufka nadaafadda waxay ogeysiineysaa jacaylka aad u qabto iyo sida ay kaaga go’antahay inaad u daryeesho xaaskaaga.
Arrintaan ayaa sidoo kale tuseysa inaad diyaar u tahay inaad xaaskaaga ku taageerto xaalad kasta oo ay wajaheyso ama ay ku jirto.
U samir/ u dulqaado
Mar kasta oo ay ku jirto xilliga caadada, hormoonada ayay u badantahay inay bedelaan dareenkeeda isla markaana ay ka dhigaan qof si sahlan ku caroota ama aanan gabi ahaanba dulqaad lahayn.
Si kastaba ha noqotee, ka rag ahaan, kani waa waqtiga lagaa doonayo inaad u samirto xaaskaaga. Waa inaadan ku qasbin xaaskaaga inay sameyso waxyaabo aysan jecleysaneyn inay sameyso ama sidoo kale ay kaa diiday inay sameyso.
Wax ka ogoow Caado Wareerka & Waxyaabaha sababi kara in caadadu ay kaa wareerto
Si dhow ula soco xaaladdeeda
Inta lagu guda jiro waqtigaas bisha kamidka ah, haweenka waxay u dhaqmaan qaabab kala duwan. Haweenka qaar yaa raba inay raggooda ag joogaan oo aysan ka dheeraan halka qaar kale ay rabaan kaligood.
Hadaba, adigeey ku quseysaa ninyohow inaad noqoto qof feejigan si aad u ogaato waxay rabto oo aad u siiso. Sidaa darteed si dhow ula soco xaaladdeeda iyo wixii isbedel ah.
5 Qaabood Oo Haweeney Kasta Ay Ninkeeda Uga Heleyso Xushmadda ay Istaahisho
Gabaryahay Gacaliyahaaga Ka Ilaali Hadalladaan Ma Wanaagsana Haddii Kale….
Wax ka ogoow Yiridka & Calaamadaha lagu garto!!
3 Waxyaabood oo halis ah oo kugu dhacaya markaad seexatid adigoo Makeup kuu marsanyahay
Haweenka Oo Naca Ragga Marka Ay Ku Arkaan Waxyaabahan Soo Socda